Dastabej » बढैयातालको उपाध्यक्ष र ७ वडाध्यक्ष जितेको एमाले अध्यक्षमा किन पराजित भयो ?
बढैयातालको उपाध्यक्ष र ७ वडाध्यक्ष जितेको एमाले अध्यक्षमा किन पराजित भयो ? – Dastabej
बढैयातालको उपाध्यक्ष र ७ वडाध्यक्ष जितेको एमाले अध्यक्षमा किन पराजित भयो ?
नेपालगन्ज । एमालेले ७ वडाध्यक्ष र उपाध्यक्ष विजयी हासिल गरेको बढैयाताल गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष गुमाएको छ । एमाले बर्दियाका अध्यक्ष तथा बढैयाताल गाउँपालिको अध्यक्ष भइसकेको लालबहादुर श्रेष्ठ माओबादीका उम्मेदवारसंग अध्यक्षमा पराजित भएपछि अनेक अडकलबाजी गर्न थालिएको छ । उनका सर्मथन र बिरोधमा अनेक खाले टिप्पणी सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गरिएका छन् । उनका आलोचकहरुले दम्भी, घमण्डी नेतालाई प्रमुखमा पराजित गर्न सफल भएको खुसी मनाई रहेका छन् । समर्थकहरुले भने अन्र्तगतघातका कारणले पालिका अध्यक्ष पराजित भएको आरोप लगाई रहेका छन् । एमाले बर्दियका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ किन पराजित भए त?
लालबहादुर श्रेष्ठ प्रष्टवक्ता छन् । उनले कसैलाई नमिठो लागोस तर मनमा लागेका कुरा बोलिदिन्छन् । व्यक्तिगत स्वभाव कडा छ । अरुका कुरा कम सुन्छन् आफू बढी बोल्छन् । तर विकासका काममा भने रातदिन खट्छन् । उनले सित्तिमिति कार्यकर्ता र जनतालाई नमस्ते नगर्ने र नमस्कार नफर्काउने ठूलो आरोप छ । यद्यपी उनी मनका भने सफा मानिन्छन् । अरुको कुरा कम सुन्ने, नमस्ते गर्न कन्जुसाई गर्ने भएकाले उनलाई अधिकांशले घमण्डीको आरोप लगाउँछन् । तर, उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले भने बाहिर कडा स्वभावकको देखिए पनि उनी कार्यकर्ताप्रति निकै नरम छन् । विकासका कामका लागि बजेट छुट्याउने देखि लिएर निमार्णको कामलाई पटकपटक अनुगमन गरी कर्मचारीलाई निर्देशन गरिरहन्छन् ।
लालबहादुर श्रेष्ठको आनीबानी र व्यहार बारे सर्वसाधारणहरुलाई खासैको चासोको विषय होईन । काम परेका बेला सर्वसाधारणहरुले भेट्नु हुन । तर, श्रेष्ठले सम्मान गर्ने केही नेता र कार्यकर्ता भनाउँदाहरुले चिया पसलमा बसेर कुरा काट्ने गरेकाले त्यो खबर गाउँमा फैलियो र चुनावमा त्यसको असर देखियो । एमालेका केही कार्यकर्ता र नेताले चोक चौरहवाको चिया पसलमा लालबहादुर घमण्डी छ, कसैको कुरा सुन्दैन, खतम छ, धुब्रे हात्तीजस्तै हो । सबै कुरा आफैले जानेको जस्तो गर्छ, नमस्ते गर्दा फर्काउँदैन । कस्तो खालको मान्छे होला ? हामी त कायल छौँ त्यस्को व्यवहार देखेर भन्दै पाँच वर्ष बिताए । ५ वर्षमा श्रेष्ठबिरुद्धको हल्ला घरघरमा पुग्दै गयो । जनताले होला त नि ? एमालेकै नेता र कार्यकर्ताले भनेपछि लालबहादुर घमण्डी नै होला । नमस्ते नै नफर्काउने मान्छे हाम्रो नेता कसरी मान्ने ? जसका कारण ७ वटा वडा र उपप्रमुखमा एमालेकै उम्मेदवार जितिरहँदा १ हजार बढी मतले अध्यक्षमा पराजित भए । मत परिणाम हेर्दा भने उपप्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म सुर्यमा छाप लगाइएको देखियो । अध्यक्षका उम्मेदवार श्रेष्ठलाई क्रस गरिएको पाईयो ।
श्रेष्ठ निकट एमालेका केही नेता र निकटका कार्यकर्ताहरुले लालबहादुर घमण्डी, अटेरी नमस्ते नफर्काउने भन्दै कुरा काटिरहँदा माओबादीबाट अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका हिमालय त्रिपाठी मतदाताहरुलाई ढोग्दै मत मागे । मतदाताले घमण्डी नेतालाई भोट दिनुभन्दा यही ठिकभन्दै केहीले भोट दिए । सांरशमा भन्नु पर्दा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले ५ वर्षसम्म लालबहादुर श्रेष्ठले गरेका विकासका काम र सकारात्मक कामका प्रचार कहिल्यै चिया पसलमा गरेनन् । उनले बनाएका ५८ किलो मिटर पक्की सडक, बढैयाताललाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन लगानी, बिद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र वडा भवन निमार्ण, जनता आवास, कोरोनाको महामारीमा जनतालाई दिएको राहत उनले गरेका सुशासनका काम जनताले सुन्न पाएनन् । नेता श्रेष्ठ बारे उनकै केही कार्यकर्ताले गरेको भ्रमक प्रचारको शिकार स्थानीय तहको निर्वाचनमा भए ।
३) केही वडामा उम्मेदवारी चयन विवाद
बढैयाताल गाउँपालिकाको वडा न. १ एमालेको गढ मानिन्छ र हो पनि । तर, उक्त वडाको अध्यक्षका लागि विवाद भयो । एमाले बढैयात गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष प्रेम थापा वडाध्यक्षका उम्मेदवार हुनआफै सक्रिय भए । तर, स्थानीय मतदाताहरुले गाउँपालिका कमिटिले वडाध्यक्षमा लड्नुको सट्टा सिनीयर नेतालाई टिकट दिन सुझाए । पुराना तथा पाका नेता कबिराम सुनारलाई वडाध्यक्षमा टिकट दिनु पर्ने अधिकांशको सुझाव थियो । तर, थापा पछाडि हटेनन् । आफैले वडाध्यक्षको टिकट लिए । एमालेका पाका नेता कबिरामले बागी उम्मेदवार स्वतन्त्रबाट दिए । उनको चुनाव चिन्ह पुतली थियो । उनले करिव ५ सय मत पाए । प्रेम थापा झिनो मतले जिते तर, त्यसको असर पालिका अध्यक्षमा देखियो । पालिका प्रमुखका उम्मेदवार श्रेष्ठले जम्मा ५ सय मतले लिड गरे । नेता सुनारलाई टिकट दिएको भए श्रेष्ठ कम्तिमा पनि १५०० मतले लिड गर्न सक्थे । प्रेम थापा वडाध्यक्षमा जिते पनि त्यसको नराम्रो गरी असर पालिका अध्यक्षलाई पुगेको छ ।
त्यस्तै वडा न. ५ मा पनि वडाध्यक्षको टिकटका लागि विवाद भयो । २०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट अध्यक्षमा उठेर पनि पराजित भएका लल्लु थारुले टिकट पाउने अडान राखे तर, जिल्लाले नरे थापालाई उम्मेदवारी दियो । लल्लुले उम्मेदवारी नपाएपछि रेशम चौधरीको नगरिक उन्मुक्ति पार्टीले वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ज गर्यो । नागरिक उन्मुक्तिले एमालेले थारुलाई उम्मेदवारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारी दिएको थियो । उक्त पार्टीले वडामा मात्रै ७ सय बढी मत ल्यायो । एमालेका वडाध्यक्ष उम्मेदवार २८ मतले जिते पनि पालिका अध्यक्षमा नराम्रो गरी धक्का पुग्यो ।
आफूलाई अन्तर्घात त गर्नसक्ने भन्दै श्रेष्ठ सचेत थिए । अन्र्तघात गर्न सक्नेहरुको पहिचान गरी रिझाउन खोजे । गाडीमै राखेर सगसंगै हिडाए । तर, उनीहरु पग्लेनन् । भित्रभित्रै मिसन जारी राखे । एमालेका जानकारहरुका अनुसार कम्तिमा पनि अन्र्तघातकै कारण साढे १६ सय मत एमालेका पालिका प्रमखुलाई आएन । माओबादीका पालिका प्रमुखलाई गाडी दिने, प्रचारप्रसारमा सघाए । अन्र्तघात गर्नेहरु मतदाता कहाँ पुगेर उपाध्यक्षदेखि सदस्यसम्म भोट दिने र पालिका प्रमुखमा माओबादीलाई मत दिन सुझाव दिएका थिए । त्यसका लागि दानापानी पनि खर्च गरिएको एमालेको दाबी छ ।
५ं) कांग्रेसको मत माओवादीलाई
बढैयाताल गाउँपालिकामा कांग्रेसका उम्मेदवार थिए, युवा नेता भगतबहादुर नेपाली । उनी शालिन छन् , पढेलेखेका छन् । वडा न.८ मा कांग्रेस र माओबादीको गठबन्धन थियो । कांग्रेस कुनै पनि हालतमा जित्दैन भन्दै कम्तिमा पनि १७०० कांग्रेसका मत माओबादी उम्मेदवारलाई गयो । कतिसम्म भने कांग्रेसका उम्मेदवार नेपालीलाई वडा न. ७ र ८ मा एक दिन पनि प्रचार गर्न दिइएन । वडा न. ६ मा राम्रो मत पाएका नेपालीले पालिका भरी ६५५० मत पाए ।
हारेर पनि जितकै भूमिकामा
पालिका अध्यक्षमा लालबहादुर श्रेष्ठ पराजित भए पनि उनको पार्टीले ७ वटा वडाध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको छ । ६ न. वडामा कांग्रेस र ५ न. वडामा माओबादीले जितेको छ । पालिका प्रमुखमा माओबादीले जिते पनि निर्णय भूमिकामा एमाले छ । एमालेलाई मिलाउन नसक्ने हो भने माओबादीबाट जितेका प्रमुख अल्पमत पर्ने छन् । उनको निर्णय पास नहुन सक्छ । त्यसैले एमाले अध्यक्षमा पराजित भएर पनि जितकै भूमिकामा देखिएको छ ।
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार १४:०२ प्रकाशित